Dhismayaasha Horseed | December 2019
Ugu Weyn Ee Dhismayaasha Horseed
Sharaxaadaha ugu wanaagsan ee farduhu
Midabka faraska ayaa ah qaabka ugu weyn ee xayawaanka. Dabeecadani waa dhaxli. Xeerka waxaa lagu go'aamiyey ma aha oo kaliya ku saleysan midabka jirka ee faraska, laakiin sidoo kale tixgelinaya midabka malayga, addimada, indhaha, indhaha. Qaybinta qaababka waa mid aad u cad, mana jirto wax isbedel ah. Fardoole leh daboolan ma kori karo mane cad, iyo faraan guduud ah ma yeelan karaan addimada madow.
Marka aad maqashid dhawaaqyada Ruushka ee gabowgii hore ee ku saabsanaa "laba faras oo qoryo ah ayaa u duulay si ay u waaberiyaan," waxaad si lama filaan ah u qabsanaysaa fikirkaaga: guud ahaan bay fardo yihiin waxa ay yihiin? Kuwa doonaya inay bartaan wax kasta oo ku saabsan suurtogalnimada munaasabada caamka ah, waxaan si faahfaahsan uga sheekeyn doonaa. Asal ahaan magaca magaca lafdhabarka Asal ahaan magaca astaamaha fardaha fardaha ma jiro wax cad cad.
Miceh faras faras: taariikh, noocyo midab leh
Muddo dheer ayaa fardahow xiiso leh leh nimcada iyo quruxda: madow, geedka, caleemaha ... Dhamaan kuwan midabada faras waxay leeyihiin awoowayaasha "duurjoogta ah". Miceh faras faras - maya ka reeban. Qaar ka mid ah taariikhda iyo halyeeyada Aan wax ka qabanno midabka murqaha musqusha. Faraska dhererkani wuxuu leeyahay dharka midabka leh ee cagaarka leh madow leh, waana aabaha faraska cirifka.
Faras waa xayawaan cajiib leh oo ku raaxaysanaya nimcadiisa, aristocracy iyo sharaf leh. Dunida casriga ah, fardaha farduhu waxay ku jiraan gabaabsi weyn. Xaaladdani waxay ka timaaddaa suunka khanka, laakiin waxay leedahay midab iftiin leh. Qaar ka mid ah taariikhda Faraha iftiinka midabada cagaarka ah waa xayawaan aristocratic ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Dhismayaasha Horseed 2019